Bangladesh: Dad loo xiray burbur - BBC Somali - Warar
Bangladesh: Dad loo xiray burbur
Markii u dambaysay ee la cusboonaysiiyay: 27 Abriil, 2013, 09:53 GMT 12:53 SGA
Malaayiin qof ayaa ka shaqeeya warshado dharka u sameeya reer galbeedka.
Shaqaalaha gargaarka ee Bangladhesh ayaa badbaadiyay labaatan iyo afar qof oo kale oo ka badbaaday dhismo siddeed dabaq ah oo soo dumay arbacadii.
Dhismaha ayaa ahayd warshad dharka lagu tolo. Wariyayha BBC ayaa sheegay inuu arkay gabar laga soo jiidayo burburka. Dad badan ayaa wali ku xayiran burburka, boqolaal qof ayaa caawinaya shaqaalaha gargaargka.
In kabadan saddex boqol oo qof ayaa la ogyahay inay ku dhimatay, walina waxaa maqan boqolaal qof kadib shilkii ugu xumaaee warshadaha dalka Balgaladesh.
Dhismaha ayaa la ogaa in dilaac ku yaalay, kahor intaysan soo dumin, laakiin aan waxba laga qaban.
Boliiska ayaa sheegay inay xireen laba injineer oo dhisay dhismaha, ninkii lahaa dhismaha iyo agaasimihiii warshada dharka samaysa.